दोश्रो बजारमा १५ जलविद्युत कम्पनीको सेयरमूल्य रु. १०० भन्दा तल Bizshala -
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपीओको आवेदनमा वर्षा
दोश्रो बजारमा १५ जलविद्युत कम्पनीको सेयरमूल्य रु. १०० भन्दा तल
काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत हाइड्रोपावर उपसमूहअन्तर्गत रहेका आधा कम्पनीको सेयरमूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत हाइड्रोपावर उपसमूहमा रहेका ३३ कम्पनीमध्ये १५ को सेयरमूल्य अंकित मूल्य(रु.१००) भन्दा मुनि दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको हो ।
यो साताको अन्तिम दिन हिजो बिहीबारको अन्तिम सेयरमूल्यका आधारमा दोस्रो बजारमा रु.१०० भन्दा तल नै सेयर फालाफाल उपलब्ध भइरहेको देखिएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन(आइपीओ)मा अंकित मूल्य रु.१०० मा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएका ३३ हाइड्रोपावरमध्ये १५ कम्पनीका सेयरमूल्य दोस्रो बजारमा अंकित मूल्यभन्दा तल र रु. ५० भन्दा माथि किनबेच भइरहेका छन् । अंकित मूल्यभन्दा निकै तल रहेको सबैभन्दा तल्लो मूल्यको सेयर भने खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको रहेको छ । यसको अन्तिम कारोबार मूल्य रु.५५ रहेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो मूल्यको सेयर चाहिँ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ ।
सरकारले नेपालका हाइड्रो व्यवसायीलाई विभेदकारी र असन्तुलित व्यवहार गरेकै कारण हाइड्रो टाइकूनहरुसमेत यस क्षेत्रबाट बिस्तारै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारले मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने प्रावधानले भने थोरै आशाको संचार गरेको देखिन्छ ।
दोश्रो बजारमै अंकित मूल्यभन्दा कममा सेयर फालाफाल रहेको अवस्थामा निश्कासन हुने आइपीओ बिक्री हुने संभावना समेत न्यून देखिएको छ ।
रिसोर्स बढाउन ब्रोकरको आनाकानी, टिएमएसमा फेरि समस्या
काठमाण्डौ । बढ्दो लगानीकर्ताको संख्यासँगै स्टक ब्रोकरहरुले...
नेप्से १४१५ विन्दूबाट माथि उक्लिए एक महिनामै १६०० को विन्दू
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा रौनक छाएको छ । बढ्दो अनलाइन...
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओमा थामिनसक्नु आवेदन
काठमाण्डौ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको...
कोरोनाले छोएन लगानीकर्तालाई, खरीदचाप बढ्दा नेप्से १४०० माथि
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै देशका विभिन्न शहरहरु...
सञ्चयकोषले स्टक डिलर कम्पनी दर्ता नगर्ने
काठमाण्डौ । कर्मचारी सञ्चय कोषले स्टक डिलर कम्पनी दर्ता नगर्ने...
नेप्सेमा थपियो ४.४३ लाख कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ४.४३ लाख कित्ता सेयर...
नेपालमा अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्ने १७.७७% मात्र, २० दिनमै बढे
काठमाण्डौ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार धितोपत्र दोस्रो बजारमा १७.७७...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले लिलामीमा राखेको सेयरमा आवेदन
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लिलामीमा...